नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट ?
कल गर्लहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, गल गर्ल स्टेसनहरू। दिनप्रतिदिन बदिलँदो जीवनशैली र आयस्तरसँगै गल गर्ल स्टेसनहरू बनिरहेका छन्। अब यस मागप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।janaboli बाट